Maadey oo Budo Caydhiin ku Daray Badarkii Bislaanaayey – Rasaasa News
Maadey oo Budo Caydhiin ku Daray Badarkii Bislaanaayey
Sep 22, 2009 Maadey
Ma maqashay Maadeey wuxuu yidhi, waxaa fajac iyo Amakaag noqtay markii ay ummada Somalida Ogadeeniya dhagaystay hadal Maadeey ka yidhi Denver/Colorado, kaas oo uu si cad uga qiray in uusan raadinaynin xornimada dhulka Somalida Ogadeeniya ee ay Itoobiya gumaysato, balse uu raadinayo in uu Itoobiya madax ka noqdo.
Maadeey Muxuu Yidhi!
“ONLF waxay goosatay , labo shay in ay sameyso, horta dhulkan Itoobiya la yiraahdo waa quraafaad weeye,dhulkan waa dhul Afrikaan ah, waa inagaa is kale, xabashidda inagaa ka xigna, dhulkan shacab kushiti ah ayaa is kale, shacab somali ah ayaa is kale, shacab Oromaa is kale, shacab Sidaama is kale, Afar baa leh, wixii hada ka dambeeyo ha naga qaybinina dhulka, waxa Itoobiya la yiraahdo waan qabanaynaa, markii hore waxay ahayd in inagoo Somali ah in aan barinno, oo aan dhahno war Itoobiya xornimadeenna ha na siiso. Itoobiya xornimo nama siinayso, maxay noo siinaysaa, oo inagaaba xor ah, anaga ayaa siinayno, axmaaradda, Tigreyga iyo wixii kale ee dulanka wadda inaga ayaa waxaan rabno u ogolaanayna , oo siinayna , waa go’aan aan isla gaarnay anaga iyo Oromadda. Waan qabanaynaa Itoobiya, oo xoog baan ku qabanaynaa, dhamaan shucuubta aayo ka talintoodda ayaa la siinayaa. Iyagoo siman ayaan madaxa ka garaacaynaa, waa go’aanka OLF iyo ONLF”.
Maday wuxuu hadalkiisa ku qirayaa in uu Itoobiyaan yahay [balaayo ma joogto; sow kii Kenyaanka ahaa markuu yaraa, kolkuu waynaadayna noqday Somaliga, ugu dambayn kolkuu duqoobayna noqday Itobiyaan], qof xor ahna yahay oo aanay Itoobiya gumaysanin. Wuxuu sheegay in ay Oromadda go’aan isla gaadheen, balse ma uusan sheegin Oromadda uu ka hadlayo. Waxaa hadalkiisa ka dhadhamaya inaan loo halgamaynin Xoriyad.
Su’aashadda isweydiinta mudan ayaa ah;
Imisa waji ayuu Maaday leeyahay?
Wuxuu kol ahaa ururkii SPM garabkii Ahmed Omar Jees, wuxuu Xoghayn u ahaa Mohamed Farah Caydiid, wuxuu USC wakiil uga noqday Addis Abiba.
Abdullahi Mohamed Sacdi maamulkiisii wuxuu ka ahaa dhise [Architecturer], wali ma aanan iloobin hadaladii uu kaga khudbadeeyay magaaladda Godey ” Itoobiyaan ma nihin, Shacab ogaadeen ah baa nahay, waxaana xaq u leenahay in aan Itoobiya ka go’no, maamul hoosaad uma baahnin, waxaan xoriyad ahay oon ku qancayno ma jiro”.
Khudbadaasi oo uu meel fagaro ah uu ka jeediyay, waxaa la yaabay shacabkii iyo Ciidankii Itoobiyaanka ahaa, ee meeshaa joogay, maalintaa wixii ka dambeeyay, ciidamada Itobiya waxay bilaabeen in ay ugaadhsi, Jabhadda ONLF waxay gashay duurka, iyada oo 5 qori wadata, shacabkii taageerayaalka ahaana waxaa soo gaadhay dhibaato. Markuu dhibkaa sameeyay wuxuu aaday Hargaysa, sidiisaba Maadeey Bil kaamil ah guddaha Ogadeeniya ma joogin. Maalintii uu ONLF ku soo biiray, wuxuu Sheikh Ibrahim u magaacabay Hog. Dhaqaalaha, masuuliyadaasi wuxuu la fadhiistay Hargaysa, illaa uu Eng. Salahdin Macow Visa ugu diray, si uu uga qayb galo shirkii Jarmany December 1994, dib dambana uguma noqonin shacabkii iyo dhulkii uu dabka galiyay.
Masiirka Shacabka Somalidda Ogadeniya ma aha mid uu Maadeey ka arimin kara, ONLFta uu sheeganayana wax Martabad ah oo uu ka hayo ma jirto, sidaa darteed beenta iyo quraafaadka ay isaga iyo Daud Ibssa ay isku shushubteen waxa u hirgalaya ma aha.
Daud Ibssa wuxuu ahaa Guddoomiyihii OLF, waxaana maamulka kaga horeeyay Guddoomiyahii hore mudane Galasa, Daud waxaa lagu doortay Shirweynahii ka dhacay Eritrea, waxaana la doortay afar sanno. Mudadiisii markuu dhamaystay ayuu diiday in uu shirweyne qabto, halkaas waxaa ka dhashay Khilaaf aad u weyn, xubnihii Guddiga fulinta u ahaa intoodii badanayd way ka baxeen ururka. Guddiga Fulinta ee OLF waxaa hadda Guddoomiye u ah General Kamaal oo isagu ku sugan dalka Eritrea.
Hadaba riyadda Maadeey in ayna wax socon kara ahayn waxaad ku garanaysaa in uu daba socdo Da,ud Ibssa, oo aan baalal lahayn.
Xaqiiqada dhabta ah ee Oromadda haatan ka jirta, ayaa ah in ay aad u kala jajab san yihiin, waxayna u kala bexeen 6 qaybood. Afar qaybood iyo garabka General Kamaal waxay sameysteen magac ay ku bahoobeen, iyagaana ah cududa maanta ka jirta Oromiya. Shantaa Urur waxay aaminsan yihiin in la gumaysto, oo waxay haatan u dagaalayaa in ay ka xoroobaan Itoobiya. Haddaba ninka leh Itobiyaan baan nahay, hurdada ka soo toos.
Maadeey kuma hadli karo magaca Umada Somalida Ogadeeniya, waxaa kale oo uusan magaceeda iyo mabaadiideeda midna ka hadli karin Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], waayo waa la og yahay ninka uu yahay waxana kuma biirin karo waxna kama goyn karo ujeedada Jwxo. Hadii uu Oromo raaci waxaa uga dhaw Kuukuuyadii uu la koray, ummada Somalida Ogadeeniya in la gumaysto iyadaa Ogg iyo intii danaynaysa.
Sheekadan waxaa na soo gaadhsiiyey
Heshiiskii Burburinta Ururka ONLF iyo Xog La,aantii Dadweynaha
Gudoomyaha Jabhada Xoreynta S/Galbeed oo ugu Hambalyeey Shacabka S/Galbeed Munaasabada Ciida